महिला हिंसाको मूल कारण यौन सम्बन्ध नै हो « News of Nepal
चिकित्सक, मानवअधिकार रक्षक
नेपालमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा आजका मितिमा सर्वाधिक सक्रिय महिलाको सूची बनाउँदा डा. रेणु अधिकारीको नाम कति नम्बरमा आउला ? ठ्याक्कै नम्बर भन्न नसकिए पनि एकै हातका औंलामा उहाँ समेटिनुहुन्छ भन्न अलमलिनुपर्दैन । स्त्री रोग विशेषज्ञ अधिकारीलाई रेणु राजभण्डारीका नामले चिन्नेहरु पनि धेरै छन् । तर, अहिले उहाँ राजभण्डारी हुनुहुन्न । त्यसो त, यो अन्तर्वार्ता व्यक्तित्वमा केन्द्रित नभएर विषयमा केन्द्रित छ । विषय हो– यौनिकता वा यौनअधिकार, जसमा खुलेर सम्बाद गर्न नेपाली समाज आजपनि चाहँदैन । यस हिसाबले नेपाल समाचारपत्रका कपिल काफ्ले र भगवती तिमल्सिनाले दुर्लभ पात्र हात पारेका छन् अन्तर्वार्ताका लागि:
डाक्टरसाब अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
म अहिले तरंगिनी नामको संस्थामा आवद्ध छु । राज्यको पुनःसंरचनापछि स्थानीय तहमा अधिकार पुगेको अवस्थालाई सदुपयोग गर्दैछु । स्थानीय तहको नेतृत्व महिलामैत्री र लैङ्गिक समानताका पक्षमा उभियो भने मुलुकमा उल्लेखय प्रगति हुनेमा म विश्वस्त छु । खासगरी, महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अभ्यास भयो, केही सिकियो, जीवनभर यही काममा समर्पित हुनुछ । हाल पालिकाहरुमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नु निकै आवश्यक पनि छ ।
सामाजिक रुपमा सोच रुपान्तरण नभै महिला अधिकारमा सुधार र महिला हिंसाको अन्त्य हुन्न भन्ने मेरो २८ बर्षको अनुभवले बोल्छ । अहिले यो परिवर्तन गर्नसक्ने निकाय भनेको पालिकाका मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, सदस्यहरु नै हुन् । योजनाहरु लैङ्गिक समानता सचेत बनाउन सकेमा ५ देखि १० बर्षमा वातावरण नै परिवर्तन हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु र उत्साहित भएर लागेकी छु ।
पितृसत्ता र पुरुषत्वलाई कसरी आन्दोलनको राजनीतिक कडी बनाउनुभएको छ ?
महिला आन्दोलनमा तहगत रुपमा थुप्रै आधार तय भएका छन् । पितृसत्ता एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो, तर सबै यो मात्र होइन । पुरुषत्व पनि त्यस्तै हो । समाजमा पितृसत्ता र पुरुषत्वले महिलामाथि विभेद गरेको, उनीहरुको कामलाई प्राथमिकता नदिएको यथार्थ हो । सामन्ती पूँजीवादी पितृसत्ताले हाम्रो समाज जर्जर भएको छ । आफूलाई कम्युनिष्ट र प्रगतिशील भन्ने पार्टीहरुपनि यसबाट ग्रस्त छन् । महिलाको कामलाई प्राथमिकता नदिएकोले समाजमा विभेद कायम रहेको हो । राजनीतिक परिवर्तनहरुले लैङ्गिक असमानताको पक्षलाई समेट्न सकेन, यस समस्याको सम्बोधन नै भएन ।
यति धेरै महिलाहरु नेतृत्वमा आइरहेका छन्, कसरी सम्बोधन भएन भन्नुहुन्छ ?
लैङ्गिक समानताका पक्षमा जे अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो पूरा भएको छैन । विगतको तुलनामा महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्था खुलेका छन्, राम्रो हो । तर नागरिक समाजका संस्थाहरु कति पारदर्शी छन्, हेर्नुपर्छ । सरकारले आरक्षणका नाममा महिलाका लागि केही अवसर दिलाएको छ, तर त्यो संख्यात्मक मात्र छ । समस्या प्रवृत्तिमा छ । उदाहरण लिनुस् न, लेफ्ट गर्भरमेन्ट भएको बेला काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने थियो । तर, सामन्ती चिन्तन जहाँको त्यहीं छ । भर्खर देशका ठूला भनिएका व्यक्तिले आफूसँग सहमत नहुनेहरुलाई ‘छौंडा’ भनिदिएका छन् । यसले सरकारका मान्छेको सोच र मानसिकता देखाउँछ ।
हामी समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं, महिला र पुरुष दुबैको सहभागिता समान हुनुपर्छ भनिरहेका छौं, यसो भएमा मात्र महिलाको राजनीतितर्फ एक तह अघि बढ्छ । समृद्धिभित्र स्वास्थ्य आउनुपर्छ । सबैका लागि समान स्वास्थ्य अधिकारका कुरा गर्दा महिलाको आफ्नो शरीभित्र अधिकार सुरक्षित नहुँदासम्म सम्भव छैन । यस्ता खालका मसिना–मसिना बिषयलाई योजनामा आउँनुपर्छ, अनि मात्र लैंगिक समानता सम्भव छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा जो १९४८ मा गरियो, ले त अभिव्यक्तिको भाषामा लैंगिक समानता देखाउन सकेन, मानव जातिका लागि तटस्थ शब्द प्रयोग नगरेर पुरुष जनाउने शब्द ही र हिमको प्रयोग गरेको छ, अरुबाट के अपेक्षा गर्ने ?
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा एक सांकेतिक दस्तावेज मात्र हो, यसका आधारमा पछि आएका राष्ट्रसंघीय घोषणाहरुमा नै लैङ्गिकमैत्री शब्दको प्रयोग हुनसकेको छैन । नेपाल मात्र होइन, सारा विश्व पितृप्रधान छ । यसलाई चिर्न विश्वव्यापी अभियानहरु चलिरहेका छन् ।
यस अभियानसँगै लैंङ्गिक मैत्री आन्दोलनमा नेपाल पनि सक्रिय हुनुपर्छ । विश्व पितृप्रधान छ भनेर, हामीले पनि यही गलत संस्कार सिक्नुपर्छ भन्ने छैन । संरचनागत विभेद सामाजिक संचनाभित्रै भएको बुझेर यसलाई राजनीतिक आन्दोलनका साथ चिर्नुपर्छ ।
कसले भन्यो महिलालाई महिनावारी सुकेपछि यौनईच्छा हुँदैन भनेर ? यो शतप्रतिशत गलत हो । महिलाहरु पनि ८० वर्षसम्म पनि यौन क्रियाकलापमा सक्रिय हुनसक्छन् । नेपालमा महिलाहरु छिटो निस्क्रिय हुनाको कारण अर्कै छ, शुरुदेखि नै उनीहरुको यौनक्रियाकलाप पीडादायी हुन्छ । यसकारणले नैराश्यता शुरु हुन्छ । त्यसका साथै आवश्यकता अनुसारको बच्चा भैसकेपछि अब केका लागि चाहियो र ?
विभेदकारी संरचनालाई चिर्न स्थानीय निकायलाई कसरी कुरा बुझाउँदै हुनुहुन्छ ?
मैले केही मूल मुद्दा उठाउने प्रयास गरेकी छु । सातवटै प्रदेशमा महिला अधिकारका मुद्दामा पहिचान, श्रम र शरीरमाथिको अधिकारका बिषयमा मुद्दा उठाउने गरेकी छु । यस विषयमा निरन्तर पैरवी गर्नुपर्छ । जहाँ बुझाउन सकिएको छ त्यहा शक्ति विभाजन छ । तर, उपलव्धि एक दिनमा सम्भव हुने विषय होइन ।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका उपमेयर मुना अधिकारी आफ्नै श्रीमान्को हिंसाबाट पीडित भएको समाचार बाहिर आयो, तर उहाँले नै न्याय पाएको देखिएन । अरुको के कुरा गर्नु ?
अहिलेको कानुनी प्रावधान र न्याय पाउने प्रक्रिया नै असहज बनाइरहेको छ । महिला आफैले बोल्न खोज्दा र बोल्न चाहँदा पनि वातावरण छैन । उदयपुरमा पनि एक जनप्रतिनिधि यस्तै समस्यामा छिन्, वालुवाटारसम्म यी समस्या नपुगेका होइनन् । सकारात्मक सोचको वातावरण बनेकै छैन ।
वातावरण कहिले र कसरी बन्छ ?
पीडित व्यक्तिलाई कानुनी लडार्इंमा जाने पूर्वाधार खडा भएपछि नै वातावरण तयार हुन्छ । महिलाले विषय उठान गर्नासाथ त्यसलाई सुन्ने परिवेश चाहिन्छ । उजुरीमा निस्केका महिलाको संरक्षण र सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ । कानुनतः जुनसुकै बेला महिला खुल्न चाहँदा सुनुवाइ हुने संरचना खडा हुनुपर्छ । अहिले यौन हिंसाका सबालमा एक बर्षसम्म उजुरी गर्न पाउने वातावरण बनेको छ । विगतको तुलनामा राम्रो हो, तर पीडित महिलालाई प्रमाण जुटाउनै नसक्ने बनाएर पीडा दिइन्छ । यस अवस्थामा समुदायलाई सचेत बनाउँदै कानुन तयार पार्नुपर्छ ।
पीडकसँगै एकै घरमा बसेर कसरी संघर्ष गर्ने ?
हो, समाजले महिलालाई नै कमजोर देखाउँछ र अदालतमा जाँदासम्म पनि कानुनको आँखाले भन्दा समाजको आँखाले हेर्ने गरिन्छ । सकिन्छ भने मिलापत्र गराउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरिन्छ । म जत्तिको व्यक्तिलाई त समाजले यस्तो के गरेको भनेर निरुत्साहित बनायो भने आम महिलाको अवस्था सहजै अनुमान गर्नसकिन्छ । यति मात्र नभै पीडक पुरुषले सार्वजनिक रुपमा महिलालाई धम्की, अपमानको भाषा बोल्दा समेत समाज रमिते बन्छ । यसकै लागि महिलालाई आफ्नो शरीरको अधिकार चाहिएको हो ।
समाजमा पुरुषले चाहँदा यौन सम्पर्क हुने, महिलाले चाहना नै व्यक्त गर्न नसक्ने । परिवारमा श्रीमान् र ससुराले चाहेका कारण बच्चा पाइदिनुपर्ने, श्रीमान्ले चाहँदा शरीर चलाउन दिनुपर्ने अभ्यास छ । महिलाले शरीरमाथिको अधिकार चाहिं कसरी कायम गर्ने ?
महिलाले नाइँ भनेर नै आपूm यौन सम्पर्कका लागि तयार नभएको जानकारी दिने हो । नाइँ भन्दाभन्दै जुनसुकै महिलामाथि यौनसम्पर्क गरिन्छ भने त्यो बलात्कार हो । नो भन्दाभन्दै गरिने यौन सम्पर्कले महिला हैन पुरुष मात्र सन्तुष्ट हुन्छ र महिला बलात्कार हुन्छिन् ।
पुरुषको उमेर बढी महिलाको उमेर कम हुनुपर्ने, पढाइ जागिर, उमेर हाइट महिलाभन्दा पुरुषको ठूलो हुनुपर्ने सोच हानिकारक परम्परागत सोच हो । यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ । अन्यथा महिलाले नाइँ भनिरहेकी हुन्छे, पुरुषले जबरजस्ती गरिरहन्छ र हिंसा भइरहन्छ । विछोडको अवस्था सृजना हुन्छ र समाजले महिला नै गलत हो भनिदिन्छ ।
महिलालाई ‘नाइँ’ भन्नसक्ने कसरी बनाउने ?
महिलालाई बलात्कार गर्नसक्ने कमजोर कानुन बनाउन समाज र राज्यका पुराना बिचार बोकेका व्यक्तिहरु लागिरहेका छन् । महिला भएका कारण तँ कमजोर छेस्, पुरुषबाट हरेक पटक बलात्कार हुन तयार हुनु तेरो नियती हो भनेर सिकाइन्छ । लैंगिक समानताका लागि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रुपमा महिला बलियो हुनुपर्छ ।
हाम्रो समाजमा कति महिलालाई यौनइच्छा र यौनतृप्ति के हो थाहा छैन । यौनको पूर्ण आनन्द नलिई आमा–हजुरआमा बनेका हुन्छन् । स्वभावतः यी महिलाहरु जिन्दगीभर श्रीमान्बाट बलात्कारमा परेका हुन्छन् । यौन शिक्षा विद्यालयमा पनि पढाइन्न । शारीरिक शिक्षाभित्र सानो पाठ राखेर यौन शिक्षा पूरा हुँदैन । नयाँ पुस्तालाई ठीक किसिमले यौन शिक्षा दिन सकियो भने मात्र कम्तीमा भोलिको पुस्ताका महिला बलात्कृत र पुरुष बलात्कारी नहोलान् ।
यौन शिक्षा कहिले शुरु गर्ने ? यौनिकता नबुझेर पनि कति घर तोडिएका छन् भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
यौन हिंसा न्यूनीकरणका लागि यौन शिक्षा नर्सरी कक्षादेखि नै सिकाइनुपर्छ । बच्चाहरुलाई सानैमा के यौन शिक्षा दिने भन्ने प्रश्न पनि उठ्नसक्छ । तर, यौन भनेको लिङ्ग योनीमा प्रपेश गर्ने कार्य मात्र हो भनेर बुझ्नुहुन्न । स–साना बालबालिकालाई यो केटा हो, यो केटी हो भनेर पढाउन सकिन्छ । विस्तारै उनीहरुको उमेरसँगै यौनाङ्ग र शरीरमा आउने परिवर्तनका बारेमा पढाउनुपर्छ । अन्ततः पेनिट्रेसनको विषय पनि आउँछ तर त्यो उनीहरुको उमेरको मागअनुसार ।
केही समयअघि नेपालगञ्जमा महिलाहरु आएर सिडियो कार्यालय घेरे । हाम्रो देशमा बालविवाह न्यूनीकरणको माग भैरहेको बिषयमा लडाइँ छ । विवाहकका लागि केटा र केटीको उमेर २० जो राखिएको छ, त्यो केटीका लागि धेरै भयो, जबकि उनीहरुमा यौन चाहना १४–१५ देखि नै देखिन्छ भन्ने उनीहरुको धारणा थियो । यौन चाहना तराईजस्तो गर्मी ठाउँमा छिटो सुरु हुनसक्छ । २ नंम्बर प्रदेशले कानुनमा परिवर्तन ल्याउने कुरा बोलिसकेको छ– यस कुरामा दम छ । हाम्रो आफ्नो जवानी हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । १२ देखि १३ बर्षको उमेरमा शारीरिक परिवर्तन आउन थाल्छ । एक–अर्को लिङ्गप्रति आकर्षक हुने, आफूलाई राम्रो, राम्री बन्न मनलाग्ने, फिल्मको हिरोको फोटो राख्न मन लाग्ने, एक–अर्कालाई जिस्क्याउन मन लाग्ने, ऐना हेर्न, राम्रो केटा–केटी हेर्न मनलाग्ने हुन्छ । त्यो नै यौन चाहना हो ।
हिजो यो उमेर आउँनुभन्दा पहिला नै विवाह गरिदिन्थे । समाजको डर थियो । यौनको बारेमा बाबुआमा कसैले बुभाउँदैनथे । अहिले मोबाइल खोल्यो भने जे पनि पाइन्छ । बाहिर गयो भने कुकुर, बिरालो, चरा हरेकको यौनिक गतिबिधि देख्न सकिन्छ । यौनईच्छा भएको समय मानिसलाई त्यो पनि एउटा सामग्री बन्छ । अर्कोतर्फ विवाह नभै यौन सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भनिएको छ । कुनैपनि छोरा छोरीले बाबुआमालाई आएर मेरो ब्वाईफ्रेन्ड छ, गर्लफ्रेन्ड छ भन्न सक्दैनन् । उसको उपाय भनेकै यौन सम्पर्ककै लागि घरबाट भाग्नुपर्ने हुन्छ । भागेपछि समाजले खत्तम भयो, अब उसलाई घरमा आउने पनि अनुमति छैन भनिन्छ ।
तपाईं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, यौनसम्बन्धी समस्या समाधान वा उपचारका लागि कति उमेरदेखिका महिला आउँछन् ?
अहिले सुरक्षित गर्भपतनका लागि १३–१४ बर्षका केटीहरु पनि आउँछन् । यतिबेला केटालाई भने भगाइन्छ र समाजले गर्भपतनमाथिको अधिकार दिएकाले अविवाहित केटीहरुले गर्भपतन गरे भन्ने हल्ला चलाइन्छ । सञ्चार माध्यमले पनि त्यसलाई बुझ्दै नबुझी प्राथमिकता दिन्छ । कम्तीमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा भएका कारण त्यो केटी बाचेकी छ, नत्र यो समाजले त्यो केटीलाई बाच्न पनि दिंदैन । यदि गर्भपतन सेवा नभएर कुमारी आमा भएको भए यो समाजले कतिजनालाई बाँच्न दिन्थ्यो ?
बालबिवाहको अभियान चलाउने हो भने सानै उमेरदेखि यौन शिक्षा दिनुपर्छ । छोरा, छोरीको केटा साथी, केटी साथी छ भने घरमा बोलाएर उमेर नपुग्दै यौन सम्पर्क राख्दा गर्भवती हुन्छ र आमा बच्चा दुबैको लागि समस्या हुन्छ भन्ने शिक्षा दिनुपर्छ । केटा–केटीको पनि बच्चा जन्माउने चाहना नभएर यौन सम्पर्क मात्र राख्ने चाहना बढेको हुन्छ । दुबैलाई बुझाएर पहिला शिक्षा पूरा गर, उमेर भएपछि विवाह गरिदिउँला भन्नुर्छ । घरमा आउँजाउँ गर्नु, बस्नु, सिनेमा हेर्न जानु कुनै आपत्तिको कुरा होइन । विवाहका लागि दुबैको पडाइ बीए पास हुनुपर्छ भनेपछि समस्या आफै हल हुन्छ ।
समाज, परिवार र आवश्यकतालाई सन्तुलित गर्दै यौन शिक्षामा कतिसम्म खुल्नसकिन्छ ?
जति छोपछाप ग¥यो त्यति नै के के न हो भन्ने हुन्छ । नेदरल्याण्डको समुद्री किनारमा परिवारका बाबु, आमा, छोरा, छोरी सबै नाङ्गै पल्टिरहेका थिए । म नेपालबाट गएको मान्छे, देख्दा पागलजस्तो लाग्यो । तर त्यहाँ कसैले बहुला भनेनन् । बच्चैदेखि केटा र केटीको शरीर देखाउने, चिनाउने, ग¥यो भने समस्या आउँदैन । युरोपमा स्टीम बाथ लिन परिवार नै नाङ्गै एकै ठाउँमा बस्छन् । त्यहाँ कुनै अप्ठ्यारो मान्दैनन्, बरु सबैले शरीर चिन्ने मौका पाउँछन् । महिला र पुरुषको शरीर देख्ने बित्तिकै यौन सम्पर्क हुन्छ भन्ने हैन, चिन्ने हो । यसरी नै शरीरको विकास भएको थाहा हुन्छ । परिपक्व भएपछि हर्मनको विकास कसरी हुन्छ भन्ने शिक्षा प्राप्त हुन्छ ।
नेपालमा यस्तो सम्भव देख्नुहुन्छ ?
किन नहुनु नेपालमा पनि सम्भव छ । अन्य मुलुकभन्दा नेपालमा सजिलो छ । तर, नेपालमा नीति नियम बनाउने ठाउँमा परम्परावादी सोचका मान्छे मात्रै बस्छन् । क्षमतावान व्यक्तिलाई नीति नियम बनाउन दिने हो भने कुनै गाह«ो छैन । मलाई शिक्षा मन्त्रालयको डिपार्टमेन्टमा राखिदिनुस्, १० बर्षमा पूरै पाठ्यक्रम नै परिवर्तन गरेर आधुनिक र समयसापेक्ष जनशक्ति तयार पारेर देखाइदिन्छु ।
नेपालमा परिवर्तन ल्याउन किन सजिलो छ भने, एक दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आफैले छाता ओढ्ने वित्तिकै जनता कति खुशी भएका छन् । मान्छेले भित्रदेखि नै परिवर्तन खोजेको छ । यौन शिक्षाको पनि परिवर्तन खोजेको छ । पर्पर मेकानिजम बनाउनुप¥यो । यथार्थ सूचना दिनुभयो भने मानिस चेतनशील प्राणी भएकाले तुरुन्तै बुझ्छ । हाम्रो बुझाई नै अत्यन्तै कमजोर छ । झण्डै २३ बर्षअघि हिमाल मिडियामा मैले यौनका बारेमा अन्तर्वार्ता दिएकी थिएँ । शक्तिको सम्बन्धको कुरा गर्दा यौन–आसनमा पनि शक्तिको सम्बन्ध छ । जहिले पनि पुरुष माथि हुनुपर्ने भनेकी थिएँ । यो विषयलाई लिएर दुई वर्षसम्म मैले त गाली मात्र खाएँ । विषय नै नबुझी जेपायो त्यो बोल्ने भनेर कति अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुले समेत गाली गरे ।
महिलामा महिनावारी सुकेपछि यौन चाहना हुँदैन र पुरुषमा ८० वर्षसम्म पनि रहन्छ । यौनिकताका लागि पनि आठ–दश वर्ष कान्छी केटीसँग केटाको विवाह कुनु ठीक हो भनिन्छ नि ?
कसले भन्यो महिलालाई महिनावारी सुकेपछि यौनईच्छा हुँदैन भनेर ? यो शतप्रतिशत गलत हो । महिलाहरु पनि ८० वर्षसम्म पनि यौन क्रियाकलापमा सक्रिय हुनसक्छन् । नेपालमा महिलाहरु छिटो निस्क्रिय हुनाको कारण अर्कै छ, शुरुदेखि नै उनीहरुको यौनक्रियाकलाप पीडादायी हुन्छ । यसकारणले नैराश्यता शुरु हुन्छ । त्यसका साथै आवश्यकता अनुसारको बच्चा भैसकेपछि अब केका लागि चाहियो र ? महिलाले आफ्नो शरीरलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै अरुको लागि भन्ने छ । महिलाको शरीर श्रीमान्को यौन सम्पर्क र बच्चा जन्माउनका लागि भन्ने छ । आफ्नो शरीर मेरो लागि हो भनेर हे¥यौं भने महिला पनि ८० वर्षसम्म यौनक्रियाकलापमा पुरुषसरह नै सक्रिय हुन्छन् ।
पाठेघर निकालेको महिला पनि यौन सम्पर्कमा सकृय हुन सक्छिन् ?
पाठेघर नहुँदा बच्चा पो जन्माउन सकिन्न, यौनसम्पर्क गर्न पाठेघर त जरुरी पर्दैन नि ? ‘पाठेघर नभएकी महिला यौन कार्यमा सक्रिय हुन्नन्’ भन्ने भनाइ पनि महिलालाई मानसिक हिंसा दिने पुरुषप्रधान अभिव्यक्ति हो, हिंसाको नमुना हो । मानिसको यस्तै सोचले महिला छिटो यौन सम्पर्कबाट निस्किृय हुन्छन् । महिलाको उमेर घटी या बढीको कुरा गर्दा महिला १० बर्ष जेठी र पुरुष १० बर्ष कान्छो भएर केही फरक पर्दैन । यस्तो भएर पुरुष यौनमा सक्रिय होला महिला नहोला भन्ने हुँदैन । पीडादायी यौन क्रियाकलाप भयो भने महिला मात्र हैन पुरुष पनि निस्किृय हुन्छन् । पुरुषले मर्दानापन यौनसम्पर्कसँग जोड्छ । उसले त्यो नै शक्ति हो भन्ने सोच्छ । त्यसैले सक्रिय हुन बल गरिरन्छ ।
यौन शिक्षा नपाएका कारण महिला र पुरुषले के गुमाइरहेका छन् ?
सबैभन्दा ठूलो माया गुमाइरहेका छन् । मायाभन्दा मधुर विषय के छ र ? तर हामी लोग्ने–स्वास्नी बीचमा पनि माया छैन, बाध्यता छ । यौन सम्बन्ध नै बाध्यताको सम्बन्धजस्तो भएको छ । कतिपय महिलालाई रात नपरे हुन्थ्यो जस्तोसम्म भएको छ । एक सय जनामा गरेको एक सर्वेमा ६० प्रतिशत महिला यौन सम्पर्कबाट सन्तुष्ट नभएको देखियो । यसमा पुरुषले पहिलो गुमाएको प्रेम नै हो । श्रीमान् श्रीमतीको बीचमा यौनका बिषयमा समझदारी नै हुँदैन । जिन्दगीभरि महिलाले सम्झौताको जिन्दगी बाच्नुपर्ने हुन्छ । यीनै कारणले द्वन्द्व, हिंसा, पुरुषले मौका मिल्यो कि यताउता चहार्ने, महिलाहरु पनि यताउति जाने खालको वातावरण खोजी गर्ने । यसो हुँदा श्रीमान् श्रीमती दुबैमा कुण्ठा हुन्छ । ८० प्रतिशत महिला–हिंसा पुरुषहरुले नै गर्छन् । यसको मूल कारण यौन सम्बन्ध नै हो । अन्तरंग सम्बन्धको एउटा पाटो यौन सम्बन्ध हो ।
तपाईको जीवनमा यी कुराहरु कतिको रहे ?
म जतिबेला ओरेकमा सक्रिय रहें, त्यतिबेला रातदिन नभनी काममा जुटें । कामका फोन पनि उत्तिकै आउँथे, भेटघाट आदि इत्यादि हुँदा श्रीमान्ले शंका गर्ने मात्र हैन महिनौंसम्म नबोल्ने, तँ त्यसैसँग जासम्म भन्ने । यो खालको मानसिक दबाब थुप्रै खेपें ।
श्रीमतीले श्रीमान्ले भन्दा बढी कमाउन थालिन् भने पुरुषमा कुण्ठा आउँछ, उसलाई त्यस कुण्ठाले नपुंसकतातिर लान्छ भनिन्छ, हो ?
यो पुरुषप्रधान मानसिकता हो । आफूभन्दा बढी सक्षम श्रीमती अगाडि आई भने अधिकांश पुरुषमा यस्तो कुण्ठा हुन्छ । कमै मात्र पुरुषले महिलालाई बाहिर धुमधाम गरेको राम्रो मानेका हुन्छन् । तर भित्र आत्मादेखि नै उनीहरुमा कुण्ठा शुरु हुन्छ । कुण्ठापूर्ण अवस्थाले नपुंसकता पनि सिर्जना गर्छ ।
नेपालको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन यी सबै विषय सम्बोधन गर्न पर्याप्त छ ?
यो कानूनले प्रजनन स्वास्थ्यका कुरा गर्छ । नहुँनुभन्दा राम्रो भएको रामै्र हो तर यो कानुनले केवल बच्चा मात्र चाहेको छ । बच्चा नपाउने महिलाको स्वास्थ्यको विषयमा र बच्चा पाउन छोडेपछिको अवस्थालाई सम्बोधन गरेकै छैन । नेपालमा यौनका बिषयमा कुरा नै हुन्न । यौन सुख के हो भन्ने कुरा नै थाहा हुन्न भने बलात्कारका कुरालाई पनि सामान्य देखिन्छ । यस्तै कारणले थुप्रै घर विग्रएकिा छन् ।
नेपालमा केही यौनकर्मी महिलाले यौनलाई ब्यवसायको रुपमा स्वीकृति पाऊँ भन्ने गरेका छन् नि ?
यसै हो भन्न गाह्रो छ । जुन महिलाहरुले गरेका छन् कसरी, किन, कुन स्टेजमा यौन व्यवसायी भए भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । जसले त्यो पिडा भोगेकै छैन उसलाई यो सही या गलत भन्ने अधिकार छैन । यौनव्यवसाय देवताको पालादेखि नै छ । तर, यौन व्यवसाय गर्नु त्यति सजिलो बिषय हैन । शरीर बेचेर कमाएको पैसा र किड्नी बेचेर कमाएको पैसा उस्तै हो । एउटा महिलाले उमेर छउन्जेल कमाउँछे र उमेर गएपछि बाच्न मुस्किल छ ।
कानुनी मान्यता दिने बेला भएको छैन । यौन व्यवसायलाई अपराधीकरण गर्नु चाहिं हुँदैन । यस अवस्थामा पु¥याउने निकायलाई अपराधी देख्नुपर्छ । महिलाहरु बाध्य नभै यौन व्यवसायमा जाँदैनन् । पढेलेखेकाले थुपै्र पार्टनर राख्दा यौनकर्मी नहुने, तर सामान्य व्यक्ति अपराधी हुने ? पुलिसले समातेर लान्छ पैसा पाए छोडिदिन्छ । त्यसैले यौनकर्मीको बाध्यात्मक अवस्थालाई अपराधि बनाउनुहुन्न ।